Maxaa lagu booqanayaa jasiiradda Sardinia | Wararka Safarka
Maxaa lagu booqanayaa Sardinia
Sardinia waa jasiirad ka tirsan Jamhuuriyadda Talyaaniga. Caasimadiisu waa Cagliari waana meel caan ku ah dalxiiska. Jasiiradda Mediterranean ee na siisa magaalooyin kala duwan oo Talyaani ah oo leh soo jiidasho badan, laakiin sidoo kale xeebaha quruxda badan iyo muuqaalka dhirta. Aadida fasaxa Sardinia waxay u dhowdahay riyo, marka waa inaan si fiican uga fikirno meelahaas aan dooneyno inaan booqano si aan wax uga maqnaan.
La Jasiiradda Sardinia waa goob ay tahay inaan ku booqano wax walba xasillooni. Soojiidashadeedu kuma eka oo kaliya magaalooyinkeeda, laakiin sidoo kale magaalooyinkeeda yaryar iyo gobollada dabiiciga ah, ee ku yaal dhufaysyada iyo xeebaha waaweyn. Waxaa jira geeso badan oo aan booqan karno inkasta oo ay tahay inaan ku dheganaano qaar.
6 Xeebaha Sardinia
Magaalada Alghero waxay leedahay taariikh weyn waana wax lala yaabo in Wuxuu ka mid ahaa taajkii Aragon intii lagu jiray qarnigii laba iyo tobnaad. Mid ka mid ah waxyaabaha ay tahay inaan ku aragno magaaladan waa derbiyadeeda iyo daarihiisa. Waxay yihiin darbiyo qaabka Catalan Aragonese ah, sidaa darteed xitaa waxaa laga yaabaa inay nagu yaqaannaan. Kaniisada weyn ee Santa María waxay ka timid qarnigii XNUMXaad waana dhismaheeda ugu weyn ee diinta. Dhexdeeda waxaan ku qadarin karnaa naqshadaha 'Gothic' oo ay weheliso qaabka 'Catalan Renaissance'. Magaaladan yar ee la booqan karo dhowr maalmood gudahood waxay leedahay wadooyin badan oo xiiso leh oo lagu lumiyo mid ka mid ah kuwa ugu caansan waa Calle Humberto oo leh dhismayaal hore sida Casa Doria ama Palacio Curia. Meelaha kale ee aan arki karno waa kaydka quruxda badan ee San Francisco iyo Dekedda Alghero, oo ka mid ah meelaha ugu nolosha badan.
Cagliari waa caasimadda Sardinia iyo magaalada ugu weyn, taas oo ka dhigaysa mid waajib ah marka la booqanayo jasiiradda. Waa inaan booqanno goobaha ugu badan ee ay wakiillada ka yihiin, sida Qalcadda San Michele meeshii ugu sarraysay. Waa deyr qarnigii afar iyo tobnaad. Jasiiradda gudaheeda waxaa caadi ka ah in laga helo dhismayaal dhufeedyo duug ah oo gacan ka geystay in burcad-badeedda iyo duulaanka laga sii daayo. Cagliari waxaan sidoo kale ka helnaa amphitheater-ka Roomaanka laga soo bilaabo qarnigii XNUMXaad ee miilaadiga. C. Tower-ka Maroodiga waa mid kale oo ka mid ah dhismaheeda ugu muhiimsan, wuxuuna leeyahay albaab nagu geeya xaafadda Castello oo leh waddooyin cidhiidhi ah oo aad u qurux badan. Haddii aan rabno waxoogaa hawl ah, waa inaan u dhaadhacno dekedda iyo Barrio de Marina, halkaas oo ay ku yaallaan dukaamo iyo maqaaxiyo. Ugu dambeyntiina, waa inaan booqasho ku tagnaa Matxafka Qaranka ee Archaeological Museum halkaas oo aan ka heli karno dhammaan noocyada kala duwan ee ka yimaada taariikhda hore.
Carthaginians ama Roomaanku waxay soo mareen magaalada Olbia. Magaaladani waa lagama maarmaan, gaar ahaan maadaama ay ku taal Costa Smeralda, mid ka mid ah meelaha ugu caansan uguna booqashada badan Sardinia. Marka lagu daro xeebaha cajiibka ah ee gobolkan waxaan arki karnaa burburka qadiimiga ah ee Cabbaas Cabu ama booqo Matxafkeeda Qadiimiga ah si aad wax badan uga barato taariikhda gobolka. Olbia Cathedral waxaa lagu dhisay Roman necropolis waxayna taariikhdu ahayd qarnigii XNUMXaad. Olbia gudaheeda waa inaan sidoo kale tagnaa wadada Corso Umberto I, xarunteeda neerfaha, meel aad ugu raaxeysan karto dukaamada iyo dhamaan noocyada madadaalada.
Castelsardo waa mid ka mid ah meelaha ugu quruxda badan dhamaan Sardinia iyo mid kale oo muhiim ah oo ay tahay inaan soo booqano. Runtii waa goob dalxiis oo waxaa fiican in marka hore la aado subaxa hore si loo awoodo in lagu dhex maro luuqyadaas yar-yar oo leh wadooyin iyo jaranjarooyin u horseedaya aagga sare ee qalcadda. Maanta waxaan heli doonnaa dukaamo xusuus badan iyo waddooyin qurxoon. In kasta oo ay dalxiis tahay, haddana waxay leedahay soo jiidasho weyn. Ma seegi karno Cathedral-ka San Antonio Abad ama Castillo de los Doria.
Ku saabsan meelaha dabiiciga ah, waxaa habboon in la muujiyo caan Gruta di Neptuno oo ku taal agagaarka Alghero. Waa god dabiici ah oo aad booqan karto oo aad ku arki karto istaatiito iyo istaatiito. Si aad u aragto godka waxaad ku heli kartaa biyo doon ama dhul, adoo lugeynaya. Labada waayo-aragnimo ayaa lagula talinayaa, maadaama aan ka arki karno godka dhinacyo kala duwan.
Waxyaabaha kale ee aan sida xaqiiqada ah ku sameyno booqashada Sardinia waa ka faa'iideyso jawiga wanaagsan si aad u barato qaar ka mid ah xeebaheeda ugu caansan. Kuwaas waxaa ka mid ah Lazzaretto oo u dhow Alghero, Liscia Rujia oo ku taal Costa Smeralda, xeebta La Pelosa oo u dhow Alghero ama Pevero beach ee Porto Cervo.
Xagga hore ee Costa Smeralda waa Beerta Qaranka ee La Maddalena jasiirad in ka badan lixdan jasiiradood oo noqotay mid ka mid ah meelaha ugu waaweyn ee dalxiisayaashu u aadaan inay ku raaxaystaan ​​xeebo aan caadi ahayn. Waxaad arki kartaa meelaha sida Spiaggia Rosa, oo ah xeeb lagu garto ciideeda midabkeedu casaanka yahay, in kasta oo waqtigan la ilaaliyo oo meel fog laga arki karo oo keliya.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » General » Maxaa lagu booqanayaa Sardinia
Goobaha Hidaha Adduunka ee Hungary